မေလ 12, 20210မှတ်ချက်များ 580
ဂျီမေးလ်သည်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများအားဖြင့်အသုံးပြုကြပြီး၎င်းသည်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆိုအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်သောအပိုကုန်ကျမှုမရှိဘဲ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ခံ၊ ဖောင့်နှင့်အကြောင်းအရာကိုဂျီမေးလ်တွင်ပြောင်းပါ။ နောက်ခံတစ်ခု ဖန်တီး၍ ၎င်းကိုဂျီမေးလ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန် "ကျွန်ုပ်၏ဓါတ်ပုံများ" ကိုနှိပ်ပါ၊ ဂူဂယ်လ်ပို့တင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးဂျီမေးလ်အခင်းအကျင်းသည်အလိုအလျောက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ နောက်ခံပုံအတွက်နောက်တစ်နည်းမှာထောင့်များမှောင်မိုက်စေရန်သို့မဟုတ်မှုန်ဝါးစေရန်အတွက်စာသား၏နောက်ခံကိုရွေးချယ်သည်။
ဆောင်ပုဒ်ရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်အားသာချက်မှာအပြောင်းအလဲများကို ပြုလုပ်၍ အကြောင်းအရာကဏ္izeကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်ဆောင်ပုဒ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘယ်ဂူဂဲလ် ၀ န်ဆောင်မှုမှအကြောင်းအရာများအကြားတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်ကိုပြတင်းပေါက်မြင်လိမ့်မည်။
ပြောင်းလဲနေတဲ့၏အမှု၌ စာ၏အရွယ်အစား၊ ဂျီမေးလ်တွင်ဤလုပ်ဆောင်ချက်မရှိပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အလားတူဖြစ်နိုင်သည်မှာ "အကြောင်းအရာအညစ်အကြေး" မှဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဂျီမေးလ်သည်စာရေးခြင်း (သို့) အဖြေပေးရာတွင်အသုံးပြုသော typeface, color, size, font ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။
iPod သို့မဟုတ် iPhone ပေါ်ရှိအရင်းအမြစ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံပါ.
Gmail ကိုသွားပါ တစ် ဦး iPod သို့မဟုတ် iPhone ပေါ်မှာ။
"Compose" ကိုနှိပ်ပါ ညာဘက်အောက်။
ကိုအသာပုတ်ပါ သင် format လုပ်မည့်အကြောင်းအရာ။
ရွေးချယ်စရာများကိုရွေးချယ်ပါ သင်လိုချင်တဲ့ format - စာလုံးစောင်း၊
Ir Gmail အက်ပ် Android Tablet (သို့) ဖုန်းပေါ်မှာ။
စိတ်ကြိုက်အခင်းအကျင်းတစ်ခုကို Gmail တွင်ဖန်တီးပါ.
အမှတ် အဆိုပါ "Themes" option ကို။
My Photos ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်လိုအပ်သည့်အရာကိုရွေးချယ်ပါ: ဓာတ်ပုံများ။ သင်ရွေးချယ်လိုသောဓာတ်ပုံ၏ URL သို့မဟုတ် URL တစ်ခုတင်ခြင်း၊ မကြာသေးမီကရွေးချယ်ထားသောဓာတ်ပုံ။
ကိုနှိပ်ပါ "Select" ထဲတွင်
နောက်ခံကိုရွေးချယ်ပါ အလင်းဖြစ်စေ၊ မိုက်ဖြစ်စေ၊
အလည်အပတ် configuration ။
ခေါင်းစဉ်များသွားပါ "ဆက်တင်များအားလုံးကိုကြည့်ပါ။ "
အဆိုပါ themes များအတော်လေးရောင်စုံဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှောင်ကိုသွားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းပါကကြိုတင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာမဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Cancel ကိုသာနှိပ်ပြီးပြုပြင်ပြီးသောအခင်းအကျင်းသို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ Instagram၊ Dropbox မှဖိုင်များပူးတွဲရန်ခလုတ်တစ်ခုထည့်ပါ။
Cloudy for Gmail ဆိုသည်မှာ Google Chrome ၏ extension ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် function များအားလုံးကို cloud ကွန်ယက်များမှသိမ်းဆည်းထားသောနေရာများ၊ အချိန်နှင့်အလုပ်များကိုသိမ်းဆည်းရန်၎င်းကိုပူးတွဲထည့်နိုင်သည့်ခလုတ်ကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။